प्रदर्शनी बहुउपयोगी हुनेमा विश्वस्त छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता प्रदर्शनी बहुउपयोगी हुनेमा विश्वस्त छौं
ई. प्रज्ञान भट्टराई, सिनियर व्यवस्थापक, आरती स्ट्रिप्स प्रालि
‘नेपाल बिल्डकन अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी २०१९’ को टाइटल स्पोन्सर हो आरती स्ट्रिप्स प्रालि । कम्पनीले यो प्रदर्शनीको मुख्य प्रायोजन गरेको छ । प्रस्तुत छ, संस्थाको काम र प्रदर्शनीका विषयमा आरती स्ट्रिप्स प्रालिका सिनियर व्यवस्थापक ई. प्रज्ञान भट्टराईसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानी :
आरती स्ट्रिप्स कस्तो प्रकारको कम्पनी हो ?
१८ वर्षअघि स्थापना भएको आरती स्ट्रिप्स प्रालि निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । हामी सादा तथा रंगीन जस्तापाता उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यसपछि एमआईई पाइप हुँदै अहिले नयाँ टीएमटी छड ल्याउँदै छौं । इटालीको बेनाली कम्पनीको नयाँ टीएमटी बार बजारमा ल्याउन लागेका छौं । व्यापार र उत्पादनको आधारमा सादा तथा रंगीन जस्तापातामा हामी एक नम्बरमा छौं । जस्तामा आरती स्पेक्ट्रा र आरती सुरक्षा नामक दुई प्रकारका उत्पादन छन् । आरती एमएस पाइप हाम्रो अर्को उत्पादन हो ।
एक्स्पोमा तपाईंहरूको सहकार्य किन आवश्यक भयो ?
नेपालमा विभिन्न कम्पनीले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । यद्यपि कुन गुणस्तरीय, कुन कमसल भन्ने छुट्ट्याउन उपभोक्तालाई कठिनाइ हुने गरेको छ । यो समस्या कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री, यस क्षेत्रमा भित्रिएका प्रविधि प्रदर्शन गर्ने र जानकारी दिने उद्देश्यमा साथ दिन हामी यो एक्स्पोको टाइटल स्पोन्सर बनेका हौं । सबै जनालाई कम्पनीको प्राविधिक तथ्यांक थाहा हुन्न । त्यसैले जस्तापाता, छठ, सिमेन्ट, मेशिन लगायत छनोटका लागि सहयोग पु¥याउने काम पनि हामी गर्नेछौं ।
एक्स्पोले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई कस्तो उपलब्धि मिल्छ ?
समग्रमा अहिले पनि ठूलाठूला आयोजनामा विदेशी रड, सिमेन्ट, मेशिन प्रयोग हुन्छ । यो अवस्थामा नेपालमै उत्पादित सामान प्रयोग होस् भन्ने जोड हाम्रो रहन्छ । स्वदेशी राम्रा उद्योगका उत्पादनको पनि समान प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेका छौं । निर्माण क्षेत्रका सबैजसो मेशिनरी उपकरण, सामान विदेशबाट आयात भइरहेका छन्, तिनको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सकियो भने हजारौं जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यो हामी तथ्य उजागर गर्दै छौं ।
एक्स्पोमा के कस्ता समाग्री र उत्पादन राखिएका छन् ?
एक्स्पोमा मुख्यतया सिमेन्ट, स्टिल, छड, सस्तो खाले घरका नमूना (प्रिफ्याब हाउस), यूपीभीसी झ्याल, बाथरूमका सामान र आल्मुनियमका सामान राखिएका छन् ।
एक्स्पोको लक्षित वर्ग कुन हो ?
हाम्रो मुख्य लक्षित वर्ग इन्जिनीयर, आर्किटेक्ट्स, दिगो विकास तथा प्राविधिक विषय पढिरहेका विद्यार्थी, विभिन्न आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र आम नागरिक हुन् । इन्टेरियर डिजाइनर, डिजाइनर र नयाँ घर, अपार्टमेन्ट बनाउन चाहनेहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् । सबै निर्माण कम्पनी, डिलर, सबडिलर, विक्रेता, उपभोक्ता र सरकारका सम्बन्धित निकायका लागि समेत प्रदर्शनी बहुउपयोगी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
अविरल वर्षाका कारण उद्योग जलमग्न, सुकुम्बासी वस्ती त्रासमा